HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul
Warsaxaafadeedka tareenada iyo wiyisha ee Istanbul
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda Istambul ayaa soo gabagabeeyay khudbadii xiritaanka “Aqoon isweydaarsiga Gaadiidka Dadweynaha ee Wheeled” halkaas oo looga hadlay xaalada hada taagan, hagaajinta iyo talooyinka nidaamka gaadiidka dadweynaha. İmamoğlu wuxuu yidhi, adan adoon hilmaamin in macmiilku wakiil u yahay, [More ...]
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, ayaa wariyeyaasha u sheegay, “Kanal Istanbul ajandaha ayuu ku jiray tan iyo usbuucii hore. Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, adiga oo tixraacaya, wuxuu yiri: Maxaad ku dhihi doontaa su'aasha,, Aniga, halkan fadhiya, oo aan shaqeyn, shaqeyn [More ...]
Cudurka DMD, oo ku dhaca da'da shan sano, waxaa muujiya luminta muruqyada sannadihii dambe. Caruurta waxaa lagu qasbay inay isticmaalaan curyaamiinta curyaamiinta da'da 10-12. Da'da 20, dhibaatooyin muhiim ah ayaa soo baxa. Tani waa xasilloonid la'aan [More ...]
Maalgashiga Magaaladda Istanbul Waxay Heshaaya saamiga ugu badan ee Miisaaniyadda 2020; Soo bandhigida miisaaniyada 25.9 ee miisaaniyada 2020 ee Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul baarlamaanka [More ...]
Project Istanbul Canal: mashaariicda ahee Channel Istanbul Turkey ayaa sii wad in aad meel horumar daqiiqadii ugu danbeysay ee mashruuca. Iyada oo dhibbanayaashii Kanal Istanbul ay sugayaan taariikhda saxda ah ee loogu dhawaaqi doono mashruucan, taariikhda qodobka ugu horeeya [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay soo qabanqaabisay “Seminaariga Noocyada Badda Hal sanad guurada 564 ee markabka Haliç. Isagoo ka hadlaya aqoon isweydaarsiga. Cemal Saydam wuxuu yidhi, "Mitirka ugu horreeya ee '25 mitir' ee Marmara wuxuu leeyahay Badda Madoow hoosteedana waa biyo cusbo leh. Qaab dhismeedkan [More ...]
IMM waxay qabanqaabineysaa aqoon isweydaarsiga gaadiidka dadweynaha oo leh taayirro caag ah; Si loo keeno xal waara oo waara dhibaatooyinka gaadiidka ee Istanbul, “Aqoon-isweydaarsiga Gaadiidka Dadweynaha ee Wheeled” ayaa la abaabulay. Aqoon-isweydaarsiga 13 waxaa lagu qabanayaa Çırpıcı Xarunta Bulshada ee bisha Diseembar, Istanbul [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada 12 2019 Diseembar 44 waxay shaaca ka qaaday inay shaqaaleysiinayso shaqaalaha 420 ee ka kala socda laamo kala duwan gabi ahaantoodna aan lahayn KPSS. Websaydh rasmi ah oo ka tirsan Madaxtooyada dawladda ee Agaasinka IMM [More ...]
IMM waxay bilowday shaqo si ay u horumariso tayada hawada iyadoo la raacayo sharciga qaran ee wadooyinka dhulka hoostiisa mara. Muunado ayaa laga soo qaadi doonaa gaariga, masraxa iyo hoolka tigidhada waxaana la falanqeyn doonaa xogta. Natiijooyinka waa la baari doonaa walxahaasna waa la burburin doonaa isha. [More ...]
Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu ayaa ka hadlay “Naval Workshop Çalış” oo lagu qabtay sanadguurada 564 ee “Tersane-i Amire kuruluş. Imamoglu wuxuu muujiyey aragtidiisa ku saabsan mashruuca 'bulstanbul Kanal Istanbul' wuxuuna yiri, "Waligey noloshayda Ibliis dusheeda ma ihi. [More ...]
ApplicationSBİKE Codsiga Mobilada Waxaa la cusbooneysiiyay: İSPARK, oo ah shirkad ku taal degmada Istambul ee Magaaladda Istanbul, ayaa dib u cusbooneysiisay codsiga mobilada ee İSBİKE, mashruucan weligiis sii koraya. Hada way fududahay in baaskiil looga kireeyo Istanbul tiknoolojiyada mobilada. Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) [More ...]
Ku soo dhowow Gaarka ah Diyaaradda Qatar Airways ee '1 Millionaire Rakaab' oo ku taal Sabiha Gökçen; Soo dhaweyn gaar ah ayaa loo sameeyay rakaabka 1 milyan ee rakaabka u ah Qatar Airways ee Sabiha Gökçen (anı SAW şehir), garoonka diyaaradaha magaalada Istanbul. Sannadkii shanaad ee duulimaadyada SAW [More ...]
Sabiha Gökçen Subway Airport wuxuu ku jiri doonaa Adeeg 2020; Ersel Göral, Maamulaha Guud ee Duullimaadyada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul Sabiha Gökçen OHS, ayaa sheegay in aasaaska dhismaha wadad-weyne labaad uu socon doono rubuc-billaha hore ee 2020. [More ...]